IPv6 အကြောင်း သိကောင်းစရာများ | Magway Region Administration Council
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အပြောင်းအလဲတွေဟာ လွန်စွာမှမြန်ဆန်လွန်းတာကို တွေ့နေရပါလိမ့်မည်။ ဒါတွေ ဟာတိုးတက်မှု့ဘက်ကိုပဲ ရည်ရွယ်တာများပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုးတက်မှု့တွေကြောင့်ပဲ Network တွေမှာအဓိကအသုံးပြုရတဲ့ Address တွေဟာလုံလောက်မှု့မရှိတော့ပါဘူး။ IPv4 Address ပဲဖြစ်ပါတယ်။IPv4 address တွေဟာ 32 bit Address format တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။Data bitတွေနဲ့ပြောရင်တော့ 8bit အတွဲ4တွဲနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထပ်ညွှန်းကိန်းအရ232 bit: 4GB.(4294967296) Space ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီaddress space တွေဟာဒီကနေ့ Internet အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ လုံလောက်မှု့မရှိသလောက်ကိုနည်းပါးနေတာတွေ့နေရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Classful နဲ့ ClasslessAddress တွေကိုခွဲပြီးအသုံးပြုထားတာပါ။ ဒါကြောင့် အစားထိုးနေရာယူမယ့်IPv6 ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်လာတာကိုတွေ့နေရပါ ပြီ။ Hardware ထုပ်တဲ့ Device ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့် ၊Softwareထုပ်တဲ့ Company ဘက်ကပဲ ကြည့်ကြည့် IPv6ကို Support လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားကြတာကိုဒီကနေ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် IPv6 ကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအချက်တွေကိုဆွေးနွေး တင်ပြတဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။
IPv6 တွေကို Internet Engineering task force(IETF)ကနေ develop လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ IP Version6(သို့) IPv6 (သို့) IPng(IP Next Generation) ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ Ipv6 ကတော့ Address Space တွေကို 128 bit အထိ extendလုပ်ပြီးအသုံးပြုထားတာပါ။ဒါကြောင့် Address space စုစုပေါင်းဟာ (3.4*1038 address space)ထိသုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မည်။
IPv4 Address space တွေမှာseparator “.” (dot) ကိုသုံးစွဲပြီး၊IPv6 မှာတော့ full colon တွေကိုအသုံးပြုပြီး Address spaceတွေကိုပိုင်းခြားထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။(ဥပမာ FEDC:BA98:7654:3210:0800:200C:00CF:1234) အားလုံးဟာ hexadecimal number တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းပိုင်းခြားထားတဲ့ အတွဲ (8) တွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွဲတစ်တွဲစီရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေဟာ 0000 to FFFF ထိအသုံးပြုနိုင်တယ်။တစ်တွဲစီရဲ့ bit ကတော့ 16bit ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် 16bit အတွဲ (8) တွဲဆိုတော့ 128 bit address space ရတာဖြစ်တယ်။တစ်တွဲချင်းစီအတွက် 16 bit အုပ်စုလို့လဲခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် one bit hexadecimal ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ဟာbinary bit ဆိုရင် 4bitဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ Group တစ်ခု(သို့) အတွဲတစ်တွဲစီရဲ့ Leading zero (ရှေ့ဆုံးကသုည) တွေကိုထည့်ပြီးမရေးရင်လဲရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် zero အတွဲတွေပါခဲ့ရင် zero အတွဲတွေကိုဖြုတ်ပြီးdouble full colons (::)ရေးနိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှာdouble full colons (::) (သို့) pair of colons တွေကိုအသုံးပြုပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့double full colons (::) (သို့) pair of colons တွေကိုတစ်ခါပဲအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။
Example: (မူလ IPv6 Address တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။)
ipv6 original address : FEDC:0000:0000:0000:00CF:0000:BA98:1234
ပြောင်းပြီးရေးနိုင်တာက : FEDC::CF:0:BA98:1324
ဒီနေရာမှာ zero အတွဲ3တွဲကို double full colon (::)နဲ့ အစားထိုးရေးလိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် 00CF အတွဲမှာပါတဲ့ Leading zero ကိုဖြုတ်ပြီး CF ပဲရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အတွဲဖြစ်တဲ့ “0” အတွဲကို Zero တစ်လုံးထဲနဲ့ အစားထိုးရေးပါတယ်။ double full colons (::)ထပ်ပြီးအသုံးပြုလို့မရတော့လို့ပါ။နောက်ထပ် ရေးနိုင်တာကတော့ FEDC:0:0:0:CF::BA98:1234 ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေးရတာရှည်တဲ့အတွက် အသုံးမပြုပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက IPv4 မှာ Loop back Address ဆိုပြီးရေးတဲ့ (127.0.0.1) Address ဟာ IPv6မှာဆိုရင် ::1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။(IPV6 မူလ Loop back address 0:0:0:0:0:0:0:1).
IPv6 ဟာ IPv4 ထက်သာတဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ Address Conflict မဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IPv4မှာ address တွေဟာထပ်ကောင်းထပ်နိုင်ပါတယ်။ IPv6ကတော့ ဘယ်တော့မှ Address ထပ်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းအရင်းကတော့ Address တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ MAC Address လို့ခေါ်တဲ့ Network Card က Hardware Address တွေကိုယူပြီးတည်ဆောက်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုး Address Conflict မဖြစ်တာကို Novell Network မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ IPX/SPX Address တည်ဆောက်မှု့ အတိုင်းလိုဆိုရင်လဲမမှားနိုင်ပါဘူး။ IPX/SPX Address တွေဟာNetwork Name တွေနဲ့ Network Card မှာပါတဲ့ MAC Address တွေကိုတွဲဘက် အသုံးပြုတဲ့အတွက် Netware မှာ Address ဘယ်တော့မှ Conflict မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီ Method အတိုင်း IPv6 Address ကိုလဲတည်ဆောက်ထားတာပါ။ တစ်ချို့သော white paper တွေမှာ IPX/SPX Address Format တွေကို Novell ကနေ IPv6 အတွက် (IETP) ကိုသုံးစွဲခွင့် အပြီးအပိုင် လှူလိုက်တယ်လို့လဲဆိုပါ၏။
Ipv6 ရဲ့ တခြား Advantage တွေလဲရှိပါသေးတယ်။ Address assignment feature ဆိုရင်လဲ easier renumbering ဆိုတဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ IPv6 address တွေကိုတည်ဆောက်နိုင် တာကိုဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာပြောရရင် Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo Interface Address တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်အတွက် Download ပြုလုပ်ပါ)